मार्क्सवादीका स्कूलका कुनै यादहरू :आदिम साम्यवादका सात चरण के–के हुन् ? – News Online
मार्क्सवादीका स्कूलका कुनै यादहरू :आदिम साम्यवादका सात चरण के–के हुन् ?
१८, भदौ सुनसरी : मानव जातिको इतिहास अत्यन्तै लामो र रोचक छ। आजको मानिस आदिम साम्यवाद, दास युग, सामन्ती युग हुँदै पूँजीवादी युगसम्म आइपुगेको छ। पूँजीवाद पनि यतिबेला चरम अर्थात् साम्राज्यवादी युगसम्म आइपुगेको छ। तर, यो यहीँ रोकिनेवाला छैन। समाज विज्ञानको नियमअनुसार यो समाजवाद हुँदै साम्यवादको दिशामा अघि बढ्दछ।
(२) वन्य अवस्थाको मध्यम चरण :– यस चरणमा मानिसले आगोको प्रयोग र औजारका रुपमा द्विवस्तुनिष्ठ हतियार प्रयोग गर्‍यो। यो चरण साँढे पाँच लाख वर्षदेखि अढाइ लाख वर्षसम्मको अवधि मानिन्छ। आगोको आविस्कार मानव जातिको इतिहासमा निकै ठूलो क्रान्ति थियो। यस चरणमा मानिसले २ वटा वस्तुको हतियार प्रयोगमा ल्यायो। यस युगमा मानिसले काठ र ढुंगाका हतियारलाई सँगै प्रयोग गर्न सक्ने भयो। (३) वन्य अवस्थाको उन्नत चरण :– यस चरणमा मानिसले उत्पादनका साधनमा थप विकास गर्दै गयो। यस चरणमा मानिसले धनुर्वाण, औजार र त्रिवस्तुनिष्ठ हतियारको प्रयोग गर्न थाल्यो। तीन वटा वस्तुलाई मिलाएर बनाएको हतियारका कारण त्यसलाई त्रिवस्तुनिष्ठ हतियार भनिएको हो। धनुर्वाण त्रिवस्तुनिष्ठ हतियार हो। यो चरण डेढ लाख वर्षयताको चरणलाई मानिन्छ ।
आज शनिवार एका बिहानै संकटादेविको दर्शन गरि आजको राशिफल पढ्नु होस।भेटी स्वरुप १ शिएर गर्नुस मनले चाहेको पूरा हुन्छ।